Imininingwane mayelana ijeli amazinyo 'Metrogil Dent'. Yokusetshenziswa
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi yokuhlanza nsuku amazinyo phakade Ubakhulula ekutheni ukuvakashela udokotela wamazinyo. Ngaphezu kwalokho, inani kungenzeka toothpastes manje ezinjalo kanye neminye imikhiqizo ye-yokunakekela amazinyo futhi ngalo ingaphakathi ngomlomo, okuyinto, ngokusho ukukhangisa, futhi uqinise koqweqwe lwawo ngezinyo, futhi bleached futhi zivimbele ukuvuvukala izinsini umoya freshening, njll Yebo, konke lokhu ngokwengxenye kweqiniso, kodwa namanje izinyo izimpushana futhi ayinhlama enzelwe, kunalokho, ukuhlanza kangcono namazinyo kusukela plaque kanye ukudla izinsalela, kanye nokuqinisa koqweqwe lwawo kanye nezinye "imiphumela ekhethekile" - lena indlela izakhiwo ezengeziwe. Ngaphezu kwalokho, namazinyo yokuhlanza ayikwazi ukuvimbela okuvela kuyo, isibonelo, tartar noma ukuvuvukala izinsini lapho izinyo ngokuhlakanipha kuqubuka. Ngaphezu kwalokho, akuwona wonke ubunjalo namazinyo eliqinile. Kodwa kuvela ukuthi bonke baphuthuma wamazinyo kuphela uma ngempela kunenkinga: ubuhlungu izinyo, kwadingeka uphawu, njll
Yiqiniso, ukubeka uphawu, asuse amatshe futhi "kabusha" amazinyo kuphela ngochwepheshe, kodwa ukunciphisa ingozi yezifo ezithile amazinyo can, uma njalo unakekele ayigcinanga ngokuthinta bona kuphela, kodwa yathinta nayo izinsini. Kungenjalo, periodontitis, gingivitis kanye caries esiyisaga uzonikezwa. Kodwa uma kwenzeka lokhu, ungase ukusiza a kwamazinyo ijeli "Metrogil Dent." Yokusetshenziswa yayo uthi kufanele lisetshenziswe gingivitis oyingozi futhi ezingalapheki, periodontitis, pulpitis, periodontitis (kuhlanganise nzima ukuvuvukala), alveolitis, periodontitis, cheilitis, stomatitis aphthous.
Ukwelashwa nale izidakamizwa is hhayi Kunconywa ukuba izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha ubudala. Uma une ukungabekezeleli ngabanye kwanoma iyiphi ingxenyana, ingxenye ukulungiselela "Metrogil Dent", isicelo yaso nayo contraindicated. Ngokucophelela le ndlela kufanele kufake abesifazane abakhulelwe, ikakhulukazi senyanga yokuqala, futhi uma uya ukuyisebenzisa ngesikhathi lactation, ukuncelisa isiphi isikhathi esingcono kakhulu ukuyeka. Kunoma ikuphi, uxhumane nodokotela wakho. Ngu imiphumela emibi ijeli zihlanganisa ubuhlungu bekhanda, abanye komzimba nezinto, ephelezelwa ukulunywa, ukuqubuka kwesikhumba, urticaria, kodwa ibekezelelwe kahle ezimweni eziningi la amagcobo.
On imithetho nokushintsha kokudla nokufakwa kusho "Metrogil Dent" imfundo utshela okulandelayo: gingivitis ke kabili ngosuku isetshenziswa izinsini labetibambile imizuzu engu-30 (kufanele uyeke ukuphuza nokudla ngesikhathi). Hashaza off ijeli akudingekile. Izinga isilinganiso esinjalo yokwelapha amabanga kusukela ezinsukwini ezingu-7 kuya kwezingu-10. Lapho periodontitis, ikakhulukazi, ngemuva kokuba kuhoxiswe qwembe yamazinyo, izidakamizwa iphathwa emaphaketheni periodontal futhi endaweni gum usuku izikhathi ezimbili ukwenza isicelo se-ijeli. Futhi ume imizuzu 30, kanye nqubo yokwelapha ithatha izinsuku 7-10 noma ngaphezulu, kuye ngokuthi kobukhulu isifo. Inani elifanayo izinqubo kanye nesikhatsi lesabelwe kubo ngaphansi alveoli kanye stomatitis.
Kodwa linamathele iphakethe umkhiqizo "Metrogil Dent" manual alisho ukuthi lokhu gel ingasetshenziswa ukuvuvukala futhi iqhubeka izinsini lapho "amakhefu" izinyo ngokuhlakanipha. Kwezinye izimo, le amazinyo elikhula ngokushesha, ngaphandle komzamo kanye nabuhlungu komuntu, kodwa ngokuvamile kukhona okuhlukile, kuze ukususwa izinyo surgically. Ngakho-ke, uma ephaketheni periodontal zanqwabelana ubomvu ke ukukususa, akudingekile ukusebenzisa emtholampilo ukubekezelela ubuhlungu umjovo kanye yokuhlanza: nje isicelo kule ndawo kwezicelo, okusho ukotini swab wamafutha, imizuzu 15-20 - Gel 'wokudonsa "ubomvu. 2-3 amaseshini izinsini zibuyele kokujwayelekile.
Uma, ngasizathu simbe, ukudayiswa ngeke we ijeli, futhi ngokushesha kudingeka kudambise izinyo, cela analogue "Metrogil Dent." Ngokuvamile ezifanayo ukubunjwa kodwa kukhiqizwa kwamanye amazwe. Ukuze analogs zihlanganisa izidakamizwa "Dentagel", "Metrodent" futhi "Metrogeks". Le mithi Pharmacy ngaphandle kadokotela. Kodwa-ke, ukusetshenziswa amafutha esithile akusho negate yokuhlanza amazinyo bese evakashela wamazinyo nokuvimbela kabili ngonyaka. Noma yimuphi izidakamizwa akufanele isetshenziswe ngokungacabangi, namanje kangcono ukwazi umbono onguchwepheshe ngakho. Uma unquma ukusebenzisa ijeli "Metrogil Dent", imiyalelo ukusetshenziswa kwaso kumele ufunde ngaphambi kokuba baqale ukwelashwa.
'Belosalik' wamafutha - yokusetshenziswa
Isifutho: ukubuyekezwa, izinzuzo, izinhlobo
Zokuvimbela inzalo Ngempumelelo ngesikhathi esebenzelana okungajwayelekile
Drama Theatre (eKursk): repertoire isikimu ihholo, umlando
Kungani eosinophils zandiswe omdala?
"Avtotransportnik" (spa, Tuapse): incazelo, izici, izithombe. JSC "sibhedlela Avtotransportnik Russia" (Tuapse): Izibuyekezo
Isitshalo seqanda utamatisi - inhlanganisela esiphelele
Pies Italian zokupheka ngezithombe
Amakhono Ukuxhumana - ke ... Incazelo. ukuthuthukiswa yekuchumana
Izinkomba, side effects kanye yokusetshenziswa "Asparkama"